WhatsApp ကို Mac အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Mac သုံးစွဲသူများမကြာခဏကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲတစ်ခုမှာအခြားသော operating systems များတွင် developer များထံမှအထောက်အပံ့များစွာရရှိထားပြီး Apple environment တွင်ပြည်ပရောက်ရန်အနည်းငယ်သာရည်ရွယ်ထားသော application အချို့တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလျှောက်လွှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထည့်သွင်းရန်အခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် MacOS အတွက် WhatsApp ကို.
ကုသိုလ်ဖြစ် developer များဖန်တီးသော open source applications များကိုခဏတဖြုတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း WhatsApp သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လကုန်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Mac အတွက်တရားဝင် WhatsApp application ။
1 Mac အတွက် WhatsApp ကို download လုပ်ပါ
2 Mac အတွက် WhatsApp အသုံးပြုနည်း
Mac အတွက် WhatsApp ကို download လုပ်ပါ
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Mac အတွက် WhatsApp ကို download လုပ်ပါ အခမဲ့သွားသကဲ့သို့လွယ်ကူသည် WhatsApp ကိုတရားဝင်စာမျက်နှာ နှင့် Mac အတွက်၎င်း၏ client ကို download လုပ်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲကိုရောက်သည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်သည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းအလိုအလျောက်သိရှိသွားလိမ့်မည် "Mac အတွက် download" ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MacOS တွင်အလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာ install လုပ်ရန် WhatsApp .dmg ဖိုင်ကို Download လုပ်ပါ။
ယခုအချိန်တွင်လိုက်ဖက်မှုသည် MacOS အတွက်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းအခြားအရာများရှိသည် Franz ကဲ့သို့ Mac အတွက်အခြားနည်းလမ်းများလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး WhatsApp ကို Mac ပေါ်တွင်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်သင်စိတ်ကူးမထားသည့်အတိုင်းရိုးရှင်းစွာသုံးရန်ခွင့်ပြုထားသော application သည် သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ download လုပ်ပါ.
Mac အတွက် WhatsApp အသုံးပြုနည်း
ကောင်းပြီကံမကောင်းတာက Mac အတွက် WhatsApp client ၎င်းသည် "ဝက်ဘ်အက်ပ်" ဟုလူသိများသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဖန်ရှင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့်ဘရောက်ဇာ၏သေးငယ်သည့်ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ WhatsApp ကိုက်ဘ်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်ပေါ့ပါးသော WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ operating system တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကားအဘယ်နည်း။
ငါတို့ install လုပ်ရမယ်။WhatsApp ကို Mac အတွက် dmg ကျွန်တော်အရင် download လုပ်ပြီးပြီလား ၎င်းစတင်သည်နှင့်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် "Bidi" ကုဒ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့် WhatsApp ကိုသုံးသော iPhone သို့မဟုတ် Android သို့သွားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp ဆက်တင်များကိုထည့်ပြီး "WhatsApp Web" ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။
ကင်မရာ၏ extension တစ်ခုက၎င်းကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မည် သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Bidi ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုလိမ့်မည် ငါတို့သည်စတင်ပါလိမ့်မယ် WhatsApp ကို Mac မှာသုံးပါ အခမဲ့။ ဤ client သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်ဖြစ်သော WhatsApp ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများဖြစ်သောသဟဇာတဖြစ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ PDF နှင့် .docx ကိုလွှဲပြောင်းရယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။